समाज – Page2– Gandaki Media
असोज १४ घोराही, दाङ। वर्षात् हटेसँगै विस्तारै दशैंको रौनक शुरु हुन थालिसकेको छ । दाङको राप्ती गाउँपालिका–४ मौरीघाटस्थित शिवचरण चौधरीको घरमा दशैंको तयारी कसरी गर्ने भन्ने छलफल चल्यो । छोरी शेमकुमारी, बुहारी निना र बुहारी र माइला छोराकी माइली छोरी रोजिना शनिबार सबैरै घर रंगाउने माटो खन्न हिँडे । दोलही खोलाको किनारामा रातो माटो पाइने […]
१४ असोज, कञ्चनपुर । निर्मला पन्तको बलात्कार प्रकरणमा विवादित बनेका एसपी डिल्लीराज विष्टसहित तीन जनाको डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट आएको छ । तर, तीनै जनाको रिपोर्ट मेल खाएन । कञ्चनपुरका एसपी कुबेरबहादुर कठायतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘डीएनए रिपोर्ट आएको छ तर, मेल खाँदैन ।’ एसपी विष्ट, उनका छोरा किरण र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुष […]
असोज १२, पोखरा । भरतपुर महानगरपालीका–१६ घर भएकी वर्ष १० की मृगौला, पेट तथा टाउकोको समस्या पिडीत विवस्ता कोइरालालाई अनेरास्ववीयू कास्की को सयोंजकत्वमा आर्थीक सहयोग गरिएकोे छ । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस गेटमा एक समाहोरका विच अनेरास्ववीयू कास्कीका अध्यक्ष विवेक देवकोटाको नेतृत्वमा नगद संकलन गरि रु. ८००० (रु. आठहजार) हस्तान्तरण गरिएको हो । ।
पोखरा, असोज । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीले तलब नपाएपछि काम छाडेर बिहीबारदेखि हड्तालमा उत्रिएका छन् । प्रशासनले आफूहरुमाथि ज्यादति गरेको साथै कार्यरत करार कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब नपाएको कारण विरोधमा उत्रिनु परेको उनीहरुको भनाई छ । ‘२०६४ सालदेखि नै विभिन्न समयमा मागसहितका ज्ञापनपत्र प्रशासनमा बुझाइरहेका छौं । सहमति पनि हुँदै आएको […]
पाेखरामा महिलाले नै लुटे सहकारी, प्रहरीले पक्रियो ३ जना
पोखरा, असोज १० । पोखराको सिर्जनाचोकमा रहेको जनएकता सहकारी लुटेराहरु पक्राउ परेका छन् । कास्की प्रहरीको सक्रियतामा दुई महिला सहित तीनजनालाई पक्राउ गरिएको हो । भदौ ३१ गते भवनको तल्लो तलाको सटर फोडी काउण्टरमा राखेको ९ लाख १४ हजार रुपैयाँ चोरेर उनीहरु फरार थिए । प्रहरीले निरन्तर अनुसन्धान र खोजी गरेपछि आज विहान बुलौंदीबाट उनीहरुलाई […]
Posted on September 26, 2018 September 26, 2018 Author By admin	Comment(0)
श्रेयाको हत्यारालाई फाँसीकाे माग गर्दै पोखरामा विशाल जुलुश (भिडियो)
पोखरा, असोज १० । पोखरा पुम्दीभुम्दीकी श्रेया सुनारको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै स्थानीयले बृहत जुलुस सहित विरोध जनाएका छन् । कोदीबाट निस्किएको जुलुश जिल्ला प्रहरी कार्यालय तर्फ गैरहेको छ । उनीहरुले हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेका छन् भने महिला हिंसा अन्त्यका लागि दवावमुलक नाराबाजी गरेका छन् । स्थानीयहरुले स्वस्फुर्त रुपमा श्रेयाको हत्यारा खोजी गर्दै कडा कारबाहीको […]